सागमा आज १२ खेल, कुन खेल कहाँ ? हेर्नुस्, सूचीसहित::Nepaloutline.com
सागमा आज १२ खेल, कुन खेल कहाँ ? हेर्नुस्, सूचीसहित
काठमाडौैं । साग सुरु भएको दोस्रो दिन आज सोमबार विभिन्न १२ वटा खेल हुने भएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र पोखरामा गरी उक्त खेल हुन लागेका छन् । पोखरामा आयोजना हुने ट्रायथलनको प्रतिस्पर्धा आज हुँदै छ।
आज सोमबारै इलाइट स्प्रिन्ट प्रतिस्पर्धामा नेपाल, श्रीलंका र भारतका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पुरुषतर्फ नेपालका नितेश मानन्धर र वसन्त थारू तथा महिलामा सोनी गुरुङ र निर्जला ताम्राकारले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
खेलाडीले ७५० मिटर पौडी, २० किलोमिटर साइकल र पाँच किलोमिटर दौड पूरा गर्नुपर्नेछ। सोमबार हुने प्रतिस्पर्धाका लागि खेलाडीहरूको दर्ता, साइकल तथा पोसाक परीक्षण गरिएको छ। यस्तै प्रतिस्पर्धामा खटिने निर्णायकहरूलाई टेक्निकल डेलिगेटले प्रतियोगिता र खेलस्थलका बारेमा जानकारी दिएका छन्।
फेवातालमा हुने प्रतिस्पर्धाका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। खेलाडीहरूका लागि तालमा एकैसाथ डाइभ गर्न मिल्ने प्लटुन प्रयोग गरिएको छ। यो पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको हो। दुई स्वर्ण पदकको छिनोफानो सोमबार नै हुनेछ।
सोमबार हुने खेल
(१) ब्याडमिन्टन (ब्याडमिन्टन कभर्डहल, पोखरा)
(२) महिला क्रिकेट (क्रिकेट रंगशाला, पोखरा)
(३) पुरुष फुटबल (दशरथ रंगशाला, काडमाडौं)
(४) गल्फ (गोकर्ण गल्फ कोर्ष, काठमाडौं)
(५) कराँते (कराँते हल, सातदोबाटो, ललितपुर)
(६) खो खो (नयाँबजार, कीर्तिपुर, काठमाडौं)
(७) टेबलटेनिस (टेबलटेनिस कभर्डहल, लैनचौर, काठमाडौं)
(८) टेनिस (टेनिस कोर्ट, सातदोबाटो, ललितपुर)
(९) तेक्वान्दो (तेक्वान्दो हल, सातदोबाटो, ललितपुर)
(१०) ट्रायथलन (लेकसाइड, पोखरा)
(११) भलिबल (राखेप कभर्डहल, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं)
(१२) उसु (आर्मी फिजिकल फिटनेश सेन्टर, लगनखेल, ललितपुर)